Ogaden News Agency (ONA) – OYSU-Texas : U Dhaqaaqa Caruurta Suuriya/Falastiin/Ogadenya
OYSU-Texas : U Dhaqaaqa Caruurta Suuriya/Falastiin/Ogadenya
Dhalinayarada OYSU-Texas ayaa todobaadkan kala qaybgalayay banaanbaxyo ay ka dhigayeen Texas jaaliyadaha Suuriya iyo Falastiin. Banaanbaxyadan ayaa loogu talagalay in caalamka lagu gaadhsiiyo dhibaatada ka soo gaadhaysa dagaalada caruurta Suuriya iyo Falastiin iyo Ogadenya.
Jaaliyadda S.Ogadenya ayaa kala qaybgalay abaabulka banaanbaxyada loogu magac daray “night vigil” iyo “Walk for the Children of Syria/Palestine/Ogaden”, – U Dhaqaaqa Caruurta Suuriya/Falastiin/Ogadenya – jaaliyadaha Suuriya iyo falastiin ee ku nool Texas. Waxay ahayd arin lagu guulaystay oy ka qaybqaateen dhalinyarada iyo ardayda ee jaamacadaha gobalkaa. Ururka OYSU-Texas ayaa la wadaagay dhaq-dhaqaaqa ay ka wadaan jaamacadaha gobolka dhalinyarada jaaliyadahaa.
Waxay aad ugu mahadnaqayaan dhalinayarada OYSU-Texas mudane Halgame Sh. Mohamed Arte oo ku soo booqday jaaliyadda Ogadenya ee Dallas isagoo ka yimid Minnesota. Wuxuu mudane Carte dhalinyarada siiyaya siminaar isagoo ku baraarujiyay inay si hagar la’aan ah uga qaybgalaan halganka.